'वर्षौं लगाएर बनाएको ब्राण्डमा धक्का लगाउने दुस्प्रयास' - Bishwo Khabar
नेपालमा आईटी व्यवसाय पनि हुन्छ भन्ने सायद कमैले सोचेका थिए होलान् । विश्वका पछि परेका देशहरूमा नेपालको नाम लिइन्छ ।यस्तोदेशमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको यति चुस्त प्रयोग हुन्छ भनेर सायदै कसैले विश्वास गर्लान् । यसैबीच नेपालमा पनि युवा उद्यमीलेआईटीलाई व्यवसायिक रूप दिए । तिनै प्रतिभाशाली उद्यमीमध्ये एक हुन् असगर अली ।
असगर अलि युवा उद्यमशीलतामा स्थापित नाम हो । देशव्यापी नेटवर्क भएको ईसेवाका अध्यक्ष समेत रहेका असगर प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीका सूचना प्रविधि विज्ञ समेत हुन् । राज्यकोषबाट एक रुपैयाँ पनि सेवा सुविधा नलिने गरी उनले सरकारी निकायलाई प्रविधि मैत्री बनाउनेकाम गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि अनुमानित ३५ अर्बको बजेटलाई ७ अर्बमा सम्पन्न गराउन उनी सक्रिय छन् ।
मैले चिनेको असगर अलि
एउटा कार्यक्रममा मैले दाइको कुरा सुन्ने मौका पाएकी थिएँ । त्यतिखेर त्यस्तो प्रतिभाशाली युवालाई देखेर मन हर्षित भएको थियो । त्यसपछि मेसेन्जरमा मैले मेसेज गरेँ, ‘दाई नमस्ते म जस्मिन ओझा । एउटा अभियान चलाउँदै छु । हजुरसँग भेटेर यो विषयमा थोरै कुराकानी गर्नुथियो ।’
‘हुन्छ जस्मीन एउटा युवाले गरेको काममा म तिम्रो कुरा बुझेर सक्ने सहयोग गर्नेछु,’ दाइको जवाफ आयो ।दाइको स्वभाव आफैँमा लोभलाग्दो रहेछ । एक हप्ता अगाडिको कुरा हो, लकडाउन सुरू भइसकेको थियो ।
हामी सबै आ–आफ्नो जीवन लकडाउनका कारण एकान्त ढंगले बिताइरहेका थियौँ । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचारआयो । दाइको विरूद्धमा लेखिएका थुप्रै स्टाटस पनि पढेँ । मलाई अचम्म र नरमाइलो लाग्यो । एउटा युवाले देश परिवर्तनको निमित्त पाइलाचाल्दै गर्दा खुट्टा तान्न खोज्ने मानिहरू कस्ता होलान् भनी सोच्न बाध्य भएँ ।
कोही मानिस पूर्ण भाको भए के हुन्थ्यो होला ? गल्ती त हरेक व्यक्तिबाट हुन्छ । तर त्यो गल्ती सुधार्ने प्रतिबद्धता गरी माफी माग्नु आफैँमा ठूलोकुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले जसरी केही प्रयोगकर्ताहरु ईसेवा बहिष्कार गर्ने अभियानमा लागेका छन्, यसले हामीलाई कहीँ पुर्याउला जस्तो लाग्दैन मलाई ।
म कानुन पढ्दै गरेकी विधार्थी हुँ । कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले भन्छु, ‘काठमान्डुप्रेस’बाट कन्टेन्ट हटाएको विषयलाई लिएर पीडित पक्षलेअसगर अली रकन्टेन्ट डिलिट गर्ने कम्पनी (शिरान टेक) विरुद्ध साइबर क्राइममा मुद्धा चलाउन सकिने प्रशस्त अवसर छ । तर, भगिनी संस्थाकोरूपमा जोडेर र्इसेवाले लुट्यो र ठग्यो भन्दै बहिष्कार अभियान चलाउनु गलत हो ।’ विधिशास्त्रले भनेको छ– कुनै पनि कानुनको अनविज्ञ क्षमाहुँदैनन । कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै शंका छैन । तर, व्यक्तिलाई जोडेर संस्थालाई मुछ्नु पक्कै पनि गल्ती नैहो ।
असगर अलीलाई बुझ्नेहरुका विश्लेषण सुन्यौँ भने यो पत्याउने कुरा होइन । उनी अनावश्यक विवादमा ‘ल्याइएका’ पात्र मात्र हुन् । उनलाईलगाएको आरोप पनि प्रमाणित भएजस्तो देखिँदैन । कोरोना नियन्त्रणको लागि खरिद गरिएको स्वास्थ सामग्रीमा भएको भ्रष्टाचारमा उनकोसंलग्नता भएको कुरालाई अलीले फेसबुक मार्फत खण्डन गर्दै प्रमाणित गर्न चुनौती दिइसकेका छन् । प्रमाणित नहुँदै त्यसको केही दिनमै अर्कोअनलाइन सामग्रीलाई रोक्न प्रयास गर्नुले चाहिँ उनले ‘सिच्वेसन ह्याण्डल’ गर्न नसेकेको हो कि भन्ने देखाउँछ । समाचार डिलिट गर्ने शिरान टेककोगल्तीले गर्दा आज डिजिटल बैकिङका लाखौँ प्रयोगकर्ता सशंकित भएका छन् । साथै ईसेवामाथि निरन्तर प्रहार भएको छ ।
पछिल्लो समय द्रुत्त गतिमा बढिरहेको डिजिटल वालेट र अनलाइन बैकिङका ग्राहकहरुलाई यस कुराले झस्काएको पक्कै छ । यस विषयमाआशंका गरेर सचेत रहनु स्वाभाविक नै हो । तर अरू कुनै गल्तीले समग्र नेपालको बैकिङ प्रणाली र ईसेवा असुरक्षित भन्नु मुर्खता हुन सक्छ ।ईसेवा ११ वर्षअघि नेपालमा सुरु भएको पहिलो पेमेन्ट गेटवे सेवा थियो । अथक र निरन्तर प्रयास पश्चात अहिले कम्पनीका २० लाख बढी ग्राहकछन् । यो ब्राण्ड बनाउन सजिलो पक्कै थिएन र छैन पनि । विडम्बना ! वर्षौं लगाएर बनाएको ब्राण्डमा केही सेकेन्डमा धक्का लाग्छ भन्ने राम्रोउदाहरण यहाँ प्रस्तुत भएको छ । इतिहास बनाउनेहरुलाई थाहा हुन्छ पीडा र संघर्ष । कलेज पढ्दा पढ्दै सुरु गरेको एफवान सफ्ट र त्यसपछिकोईसेवाले अहिले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो सफ्टवेयर कम्पनी र पेमेन्ट गेटवेको ताज पहिर्याएको छ ।
उनलाई बदनाम गर्न वर्षाैंदेखि मिडियामा दर्जनौँको संख्यामा तथ्यहीन समाचारहरू आइरहेका छन् । कहिले आईएसआईएससँग जोडेर समचारबनाएका छन्, कहिले नक्कली नोटसँग जोडेर । कहिले सरकारी ठेक्कामा हालिमुहली गर्यो भनेर । तर सत्य के हो भने आजसम्म असगर अलीकोकम्पनीले कुनै पनि सरकारी ठेक्काको काम गरेको छैन र भविश्यमा गर्ने पनि छैन । यस विषयमा कम्पनीको कुनै योजना छैन । साथै असगरअलीले अहिलेसम्म पनि राज्य कोषबाट तलब, भत्ताबापत एक पैसा पनि लिएका छैनन् ।
१ दिनको कुरा हो, निन्द्रा नलागीकन राती १२ः०० बजेसम्म बसिरहेको थिएँ । मेरो मोबाईलमा म्यासेज आयो– सुरक्षा बिरामी भयो हस्पितलजाऊँ रे ।
के भएछ भनेर फोन गरी बुझ्न मसँग ब्यालेन्स थिएन । त्यसपछि अचानक याद आयो मामुले त ईसेवा चलाउनुहुन्छ, फटाफट मोबाइल लिएररिचाज गरेँ । अनि साथीलाई हाल–चाल बुझेर अर्कै नजिक बस्ने साथीलाई अस्पताल कुर्न पठाइदिएर म बिहानै गएर भेट गरेँ ।
यो त एउटा मात्र कथा थियो, यस्ता थुप्रै जस्मीन पात्रहरू छन् जसलाई ईसेवाले धेरै सहज बनाएको छ । हामी बिजुलीको बिल तिर्न ६ घन्टा लाइनबस्नुपथ्र्यो, आज ईसेवाले गर्दा ६ सेकेन्डमा बिल तिर्न सक्छौँ । त्यो मात्र नभएर अहिले कोरोनाको कारण कारणले गर्दा घरमा लकडाउनमाबस्नुपरेको छ, हामीले घर बसिबसी रिचाज गर्न सक्छौँ । यो समयमा ईसेवाले १२० प्रतिशत बोनस पनि दिएको छ । त्यस्ता थुप्रै सैवाले गर्दा हाम्रोजीवनलाई सहज बनाइरहेको र सयौँलाई रोजगारी दिएर देश र युवालाई सम्भावनाको नमुना प्रस्तुत गरेको कुरा चटक्कै नबिर्सौं ।
हामीले पटकपटक एनसेलका सिम जलायौँ । तर एनसेल नहुँदो हो भने नेपालको दुरसञ्चार क्षेत्र यति सहज र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सोचेनौँ ।त्यसअर्थ कानुनी उल्लंघन गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याऔँ– ल्याउन सघाऔँ । तर यसरी सामाजिक सञ्जालमा आउने हल्लाको पछाडि दौडेरआफ्नो सिर्जनशील समय नष्ट नगरौँ ।
Previous articleमन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै, लकडाउन अवधि फेरि बढाउने तयारी
Next articleभारतले तीन साता लम्ब्यायो लकडाउन
Kumar Acharya April 16, 2020	At	4:56 am
जतिठुलो काम गरेपनी अलिले गल्ती गरेको हो ! आफ्नो क्षमताको दुरुपयोग गर्यो , अपराध गर्यो र त लाखौ उपभोक्ता र समग्र बैङ्किङ क्षेत्र ससङ्कित भएको छ ! यस्ले नया पाठ सिकायो ! अलिको क्षमता र प्रतिभाको मोनोपोली र दादागिरी अन्तत तोडिने भो !
समग्रमा घाटा त उ आफलाई भएको छ !
Sandeep Kc April 17, 2020	At	4:19 am
पत्रकार र ब्लगरमा फरक छ। पत्रकार हो भने पत्रकार सैलिमा समाचार लेखौ, ब्लगर हो भने आफ्नो विचार आफ्नो ब्लगमा लेखौ। माथिको लेखमा तेश्रो अनुच्छेदमा “एउटा कार्यक्रममा मैले दाइको कुरा सुन्ने मौका पाएकी थिएँ ।” पढेपछि मैले बाकि लेख पढ्ने कोसिस गरेन। तपाइलाई तपाइको दाईले कस्तो व्यवहार गर्नुभयो त्यसले घटेको घटनामा कुनैपनि फरक पर्ने छैन। कानुन पढेको बिद्यार्थी हुनु हुने रहेछ तपाइलाई “Lifting of Corporate Veil” को बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु।
“At times it may happen that the corporate personality of the company is used to commit frauds and improper or illegal acts. Since an artificial person is not capable of doing anything illegal or fraudulent, the façade of corporate personality might have to be removed to identify the persons who are really guilty. This is known as lifting of corporate veil”
समाचार डिलिट गर्ने शिरान टेक र इसेवा सिस्टर कम्पनि भएपछी वा दुवै कम्पनि पछाडिको व्यक्तिहरु यौटै भएपछी आज समाचार डिलिट गर्नेले भोलि त्यो भन्दा ठुलो Fraud नगर्ला भन्न मिल्दैन। “Company Act” लाई ढाल बनाएर छुट्टा छुट्टै कम्पनी हुन् भनेर तर्क दिन मिल्दैन ।
“यो त एउटा मात्र कथा थियो, यस्ता थुप्रै जस्मीन पात्रहरू छन् जसलाई ईसेवाले धेरै सहज बनाएको छ । हामी बिजुलीको बिल तिर्न ६ घन्टा लाइनबस्नुपथ्र्यो, आज ईसेवाले गर्दा ६ सेकेन्डमा बिल तिर्न सक्छौँ । त्यो मात्र नभएर अहिले कोरोनाको कारण कारणले गर्दा घरमा लकडाउनमाबस्नुपरेको छ, हामीले घर बसिबसी रिचाज गर्न सक्छौँ । ”
इसेवा यौटा व्यवसायिक कम्पनी हो, यस्ता सुबिधा अन्य कम्पनीले पनि दिदै आएका छन्। फेरी फेरी समाचारमुलक लेख लेख्दा आरोपितलाई दाई भनेर सम्बोधन नगर्नु होला। त्यो तपाइको ब्लगमा सुहाउला। Fact र Opinion को बिचमा फरक कानुन पढ्नेलाई राम्रो संग थाहा हुनु पर्ने हो।
RK Mahat April 17, 2020	At	7:01 am
यो केटी अलिकै मान्छे हो एसले तेस्को नराम्रो देख्दिन टेलिकम ले दिएको बोनस esewa ले दिएको भन्छे हनुमान ।
Prakaash khadka April 17, 2020	At	9:26 am
Bau ho janmauna sahayog garyo vandai ma hadnata karani garna dinu ta vayena ni… yesle aafno capacity ra power ko galat use garekai ho ra yeslai biswas garna sakinna pani aba ka dinma..
मोहन मिश्र April 17, 2020	At	11:32 am
ईसेवाले १२० प्रतिशत बोनस पनि दिएको छ । यो इसेवा ले दियेको होइन टेलीकम कम्पनी ले दियेको हो
कमरेडहरू ! आजको सचिवालय बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ । म...
यज्ञराज ढुंगेल सन् २०१९ मा चिनको वुहान प्रान्तबाट सुरु...
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई सोही...
होमनारायण श्रेष्ठ कोरोना महामारीको सुरुमा क्वरेण्टीन र आइसोलेशन बनाउने काममा...